परामर्शसहित गुणस्तरीय शिक्षा दिदैं छौं | RevoScience Nepali
Home /परामर्शसहित गुणस्तरीय शिक्षा दिदैं छौं
तोयानारायण पौडेल, प्रमुख, स्कुल अफ साइन्स, हिमालय ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेज
पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थी उत्कृष्ट हुने तर ह्वाइटहाउस इन्टरनेशनल कलेजमा पढ्ने कमशल हुन सक्दैन ।
ललितपुर जिल्लाको खुमलटार स्थित हिमालय ह्वाइटहाउस इन्टरनेशनल कलेज सन् २००१ मा स्थापना भएको कलेज हो । छुट्टै पहिचान बोकेको यस कलेज पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट संवन्धन लिएका छन् । संवन्धन लिएको विश्वविद्यालयका आधारमा कलेजलाई हेर्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्दछ भन्छन् कलेजका स्कुल अफ साइन्सका प्रमुख तोयानारायण पौडेल । पढाउने शैली, पाढ्यक्रम तथा सुविधामा ध्याननदिदा केही कलेजहरुलाई समस्या परेको उनी बताउँछन् । गणितमा स्नातक गरेका पौडेलसँगै झण्डै २० वर्ष शिक्षण पेशा अंगालेका अनुभव छन् । इन्जिनियरिङ कलेजहरुकामाझ हिमालय ह्वाइटहाउस इन्टरनेशनल कलेजलाई नयाँ शिराबाट सञ्चालन गर्न लागि परेका छन् । सन्दर्भमा उनीसँग रिभोसाइन्सले गरेको कुराकानीः
कुन–कुन विषयको अध्ययन गराउँदै हुनुहुन्छ ?
सिभिल, बायोटेक्नोलजी, कम्प्यूटर र आइटी इन्जिनियरिङमा पढाइ हुन्छ ।
नेपालका विश्वविद्यालय समस्या हुँदै जाने विदेशी तल्ला स्तरको विश्वविद्यालय आएर विद्यार्थी भटाभट लैजाने हो भने शिक्षाको भविष्य खै त ? यसलाई हेर्ने निकाय हुनुपर्दछ ।
परामर्शसहितको शिक्षा दिन लागिरहनु भन्नु भएको छ, त्यो कस्तो हुन्छ ?
अहिलेको विद्यार्थीलाई सही किसिमका ‘मोटीभेसन’ दिन सकिराखेको छैन । यसकारण इन्जिनियरिङ कलेजहरुमा भर्ना भएको ४० प्रतिशत विद्यार्थी बीचमै छोडेको देखिन्छ । यो किन भै रहेको छन् भने इन्जिनियरिङलाई अभिभावक तथा विद्यार्थीले बुझ्न सकेको छैन । यहाँ वर्षको १२ वटा विषय पढ्न पर्छ । जुन प्लस टुमा पाँच वटा विषय पढ्न पर्छ । लोड बढी देखिन्छ । त्यो लोडले हौस्यिएर आउने विद्यार्थीहरुले पढ्न सकिरहेको देखिदैन । त्यसलाई व्यवस्थापन गरी अगाडि बढ्ने योजनामा लागि परेका छौं ।
प्लस टुमा उत्कृष्ट अंक ल्याउन नसक्ने विद्यार्थीहरुले पढ्न नसक्दा त्यस्तो भएको पनि हनसक्छन् नी !
हामीले के कुरा बुझ्न पर्यो भने मानिस सवैको दिमाग बाराबरी नै हुन्छन् । तर फरक यति मात्र हो कसले समय कहाँ र कति दिन्छ भन्ने कुरा हो । जस्तो पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थी उत्कृष्ट तर ह्वाइटहाउस इन्टरनेशनल कलेजमा पढ्ने कमशल होइनन् । फरक यति हो पुल्चोकमा पढ्ने पढाइप्रति बढी केन्द्रित हुन्छन् । तर हाम्रा विद्यार्थीहरु अन्य रचनात्मक कृयाकलापमा ध्यान दिने खालका विद्यार्थी हुन्छन् । पाठ्यक्रममा उनीहरुलाई केन्द्रित गराउन कलेजले मिहिनेत गर्नु पर्दछ । पुल्चोक क्याम्पसमा विद्यार्थीले मिहिनेत गर्दछ । हामीकहाँ शिक्षक र कलेजले उनीहरुलाई सही दिशामा ल्याउन मिहिनेत गर्नु पर्दछ । फरक यहाँनेर देखिन्छ ।
उत्कृष्ट नजिता ल्याउन सघाउन के गर्नु हुन्छ ?
अभिभावकले लागानी गरेको हुन्छ । त्यो लगानीमा प्रत्येक सेमिस्टरमा कलेजले पढाउने भनेको ३ महिना जति हुन्छ । त्यो समयमा विद्यार्थीलाई ध्यान नदिई पढाइयो भने राम्रो नतिजा ल्याउन सक्दैन । प्रत्येक विषय एकअर्कासँग परिपूरक हुने हुँदा कुनै विषय उसले बुझ्न सकेन भने उसको पढाई खस्कदै जान्छ र विद्यार्थी आफूलाई कमजोर महशुस हुने गर्दछ । त्यो ४० प्रतिशत बीचमा छोडेर जाने विद्यार्थीको संख्या कम गर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यो गर्नकालागि अहिलेको विद्यार्थीहरुलाई बढी निगरानी गर्नु पर्ने देखिन्छ । किनभने आजकलका विद्यार्थीहरु इन्टरनेटमा बढी भुलेको देखिन्छ ।
शिक्षक गुणस्तरीयतामा कतिको ध्यान दिनु भएको छ ?
२५ जना लगानी कर्ता सबै १० देखि ३५ वर्ष सम्म अध्यापन पेशा अँगालेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षक मार्फत् इन्जिनियरिङ शिक्षालाई ‘प्रमोट’ गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । किनभने अहिले देशमा भूकम्प गैसकेपछि इन्जिनियरको आवश्यकता बढेर गएको छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामी इन्जिनियर उत्पादन गर्दछौं । थप उर्जा प्रदान गर्न इन्जिनियर भैसकेकाहरुले विद्यार्थीहरुको ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउने काम गर्नेछौं ।
ल्याव लाइव्रेरीको स्थीति कस्तो छ ?
हामीसँग आधुनिक खालका ल्याव छन् । बायोटेक्नोलजीमा उत्कृष्ट ल्याब छन् । ८० जना क्षमता भएको कम्प्यूटर ल्याव छन् । त्यसै किसिमका इलेक्ट्रोनिक तथा सिभिल इन्जिनियरिङको ल्याव छन् । सबै ल्यावहरु इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट मान्यता प्राप्त छन् ।
अन्य इन्जिनियरिङ कलेजले लिएकै हाराहारीमा हामीले शुल्क निर्धारण गरेका छौं । साँढे ९ देखि १० लाख सम्म लिने गरेका छौं । यो भन्दा कम लिएर पढाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । गुणस्तरीय शिक्षा दिनलाई शुल्क लिन पर्ने हुन्छ । किनभने कुनै एउटा प्राध्यापकलाई मासिक ७० देखि ९० हजारको हाराहारीमा पारिश्रमिक दिइएन भने पढाउनेवाला छैन । पढाउने कुरामा हामी कन्जुस्याई गर्दैनौं ।
इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीहरु विदेशी विश्वविद्यालयमा जान थालीसके कसरी सस्तोमा गुणस्तरीय शिक्षा दिनुहुन्छ ?
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले इन्जिनियरहरुको परिक्षाको व्यवस्था नगरी सखै छैन । सुरुबाट सम्भम नभए पनि पछिल्लो समय उत्पन्न समस्या समाधान गर्न इन्जिनियरहरुको परिक्षा लिनु पर्दछ । भारतीय कलेज पढ्न गएका कतिपय विद्यार्थीहरु छ महिनामा फर्केर नेपालमा पढेका छन् । परिषद्ले परिक्षाको व्यवस्था गर्न सकेन भने राष्ट्रको लगानी डुब्ने देखिन्छ । आखिर जनताको पैसा भनेको पनि राज्यको नै हो नी !
विदेशी कुन विश्वविद्यालयमा जाने वा नजाने भन्ने जानकारी सरकारले भन्न सक्नु पर्छ । नेपालका विश्वविद्यालय समस्या हुँदै जाने विदेशी तल्ला स्तरको विश्वविद्यालय आएर विद्यार्थी भटाभट लैजाने हो भने शिक्षाको भविष्य खै त ? यसलाई हेर्ने निकाय हुनुपर्दछ । समुन्द्र पारीका अन्यत्र देश जानलाई शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता हुन्छन् तर भारत जानलाई त्यस्तो केही आवश्यकता पर्दैन । शैक्षिक स्तर पनि कमजोर भएको देखिन्छ ।
निजी कलेजहरुको पनि समस्या होलान ? निजी कलेजहरु पनि लगानी उठाउन मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ । त्यो लगानी राष्ट्रको लगानी भनेर निजी क्षेत्रले पनि बुझेको पाइदैन । अनुगमन गर्ने निकाय चाहियो । किनभने विश्वविद्यालयको नियमन गर्ने निकाय पनि देखिदैनन् । कलेजहरुलाई राम्रोसँग नियमन गर्ने निकाय पनि छैन । कसरी हुन्छ शिक्षामा विकास ? यसकारण इन्जिनियरिङ परिषद्ले अनुगमन गर्यो भने इन्जिनियरिङ कलेको स्तर पनि उकास्न सकिन्छ ।
राजनीतिक पनि हावी भएको होलान नी !
विद्यार्थीका कतिपय मागहरु पुरा गर्न नसकिने खालका हुन्छन् ।
विद्यार्थीलाई औधोगिक क्षेत्रसँग सहकार्य गराउने कुनै योजना छन् ?
रोजगारी सुनिश्चितता होस् भनेर नेपालमा भएका आइटी सेक्टरमा पठाउने गरेका छौं । अन्तिम वर्ष सकिएपछि इन्र्टन गर्ने व्यवस्थाकोलागि पहल पनि गरेका छौं । अरु विषयकालागि पहल भैरहेको छ । यदि त्यो सफल भएमा राम्रो हुने देखिएको छ ।
विद्यार्थीहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट संवन्धन प्राप्त कलेज नपाएपछि अन्य विश्वविद्यालबाट सम्वन्धन प्राप्त कलेज रोज्छन् भन्छन्, हो ?
विद्यार्थीहरुले पहिले पुल्चोकमा कोशिस गर्छ । त्यसपछि त्यहीँ नै अतिरिक्त शुल्क तिरेर पढ्न चाहन्छ । त्यसपछि मात्र निजी कलेजहरुमा अध्ययनलागि धाउने गर्दछ । त्यसमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्वन्धन प्राप्त कलेज खोज्छन् । नपाएपछि बल्ल पूर्वाञ्चल तथा अन्य विश्वविद्याल संवन्धन प्राप्त कलेजमा आउने परम्परा देखिन्छ । हामी त्यो तोड्न चाहन्छौं ।
सुधार गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ ?
पहिलो सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । दोस्रो हाम्रा कलेजहरुमा कस्तो किसिमको पढाई हुन्छ त्यो पनि नियमन हुन सकेको छैन । १६ हजार विद्यार्थीबाट छानीएका २ सय विद्यार्थी त्यसै राम्रा हुने भए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका दाजोमा अन्य विश्वविद्याल आउन नसक्दा त्यसबाट संवन्धन प्राप्त राम्रा केलज तथा विद्यार्थीहरुलाई मर्का भैराखेको देखिन्छ ।